Nnukwu olulu a hụrụ na Antarctica | Netwọk Mgbasa Ozi
Foto - Twitter / David App
Na Antarctica, ihe na-eme na, ọ bụ ezie na ha bụ ihe okike kpamkpam, ebe ọ bụ na mgbanwe ihu igwe bụ ihe ụmụ mmadụ na-akawanye njọ n'ihi otu ha si emeso ụwa a, ha bụ ihe ndị metụtara anyị.
Akụkọ kacha ọhụrụ bụ nchọpụta nnukwu oghere site n'ụsọ Oké Osimiri Weddell na Antarctica nke juru ndị ọkà mmụta sayensị anya.
Mmiri mmiri dị iche iche dị ka nke ahụ achọtara, nke ice ice gbara gburugburu, na-etolite na mpaghara ala dị n'ụsọ oké osimiri Antarctica na Arctic. Polynyas a maara, nwere ike ịpụta na ụzọ abụọ: site na usoro thermodynamic, nke na-eme mgbe ọnọdụ ihu igwe nke mmiri na-erughị ebe oyi; ma ọ bụ site n'omume nke katabatic ifufe ma ọ bụ osimiri okwukwo, nke na-ebu ice pụọ na ókè a kara aka nke ice na-adịgide adịgide.
Ihe dị ịtụnanya banyere polynya a hụrụ n'ụsọ osimiri Antarctica bụ na ọ dị omimi na okpu pola. Dị ka ndị ọkà mmụta sayensị si kwuo, e guzobere ya site na usoro nke ha na-enweghị nkọwa ọ bụla maka ya. Ọ nwere ike ịbụ mgbanwe ihu igwe? Oge agabeghị agwa, mana otu ihe kpatara ya bụ nkwenye bụ agbaze mmiri ice n'ihi mmiri ọkụ nke Antarctic Ocean.
Foto - MODIS-Aqua site na NASA Worldview
Oge ikpeazụ a pụrụ ịhụ ihe ọ bụla yiri ya na mpaghara Oke Osimiri Weddel na 1970, mana enweghị ezigbo ngwaọrụ iji mụọ ya mgbe ahụ. Ugbu a, ekele maka Satellites na robot ndị miri emi n'ime oké osimiri, ndị ọkachamara nwere ike nyochaa ha. N'ihi ya, ha enweela ike ịchọpụta nke ahụ polynya nke ugbua di ihe dika kilomita 80.000, nke buru ibu karịa ókèala Panama.
Maka ozi ndị ọzọ, anyị na-akwado ileta ibe nke Mahadum Toronto, nke onye sayensị bụ Kent Moore bụ, otu n'ime ndị nchọpụta nke ihe ahụ, na-eme pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Nnukwu olulu a hụrụ na Antarctica